Sunday October 14, 2018 - 20:46:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 10 askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen duqeyn ay diyaarado dagaal maanta gelinkii dambe ka geysteen deegaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo.
Wararka ka imaanaya Jubbooyinka ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan ay duqeyn si qalad ah ugu beegsadeen maleeshiyaad katirsan maamulka isku magacaabay Jubbaland ee uu madaxda ka yahay Axmed Madoobe.
Duqeynta oo ka dhacday deegaanka Baar Sanguuni waxaa ku dhintay 10 askari tira kalane dhaawacyo ayaa kasoo gaaray, goob joogayaal ayaa sheegay in xilligii ay duqeyntu dhacaysay ay dagaallo culus deegaanka ku dhaxmarayeen ciidamada Al Shabaab iyo Maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe.
Meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay dagaalladii iyo duqeymihii maanta ayaa caawa maqribkii lageeyay Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, dhacdooyinka nuucaan ah ee diyaaradaha Mareykanku sida qalad ah ugu duqeeyaan ciidamada saaxiibadood ah ayaa caan ka ahaa wadamada Ciraaq,Suuriya iyo Afghanistan.
Waa Markii ugu horraysay oo diyaarada Melleteriga Mareykanka ay Koonfurta Soomaaliya si qalad ah ugu duqeeyaan maleeshiyaad saaxiibadood ah balse duqeyn sanaddii 2016 ka dhacday duleedka Gaalkacyo ayay ku dileen 11 askari oo katirsanaa maamulka Galmudug.